Madaxweynaha El Salvador oo sawir iskaga hor qaadey Qaramada midoobey kahor inta uusan kahadlin – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha El Salvador oo sawir iskaga hor qaadey Qaramada midoobey kahor inta...
Madaxweynaha El Salvador oo sawir iskaga hor qaadey Qaramada midoobey kahor inta uusan kahadlin
Madaxweynaha Salvadoran Najib Abu Keila, oo ku guuleystay madaxtinimada horaantii sanadkan, ayaa qaatay iskaga hor qaadey sawir Qaramada midoobey hortooda intaanu khudbada ka jeeedin.
Wuxuu Soo jeediyey khudbadiisii ​​ugu horreysay ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, taasoo dhalisay dhaleeceyn badan.
Najib, oo da’adiisu tahay 38 sano jir, wuxuu xukunka yimid horaantii Juun. Saddex bilood gudahood, wuxuu si weyn ugu tiirsanaa shabakadaha bulshada iyo khudbadaha uu ku muujiyey inuu diyaar u yahay inuu ka baxo waxyaabihii hore.
Isla markii uu masraxa qaatay, madaxweynaha Salvadoran wuu salaamay dhagaystayaasha, iyo xaaskiisa oo cunuggooda gacmaheeda ku haysta, ka dibna wuxuu weyddiistay waqti in uu qaato.
Wuxuu yidhi: “Dad badani waxay jeclaan lahaayeeen inay daawadaan sawirkan halkii ay maqli lahaayeen hadalka, waxaan rajeynayaa inay fiicantahay!”
“Qaar ka mid ah sawirrada ku jira barta Instagram waxay ku yeelan karaan saameyn weyn hadalkasta oo ka dhaca shirkan guud,” ayuu yidhi, isaga oo xusay in shir sannadeedkan hoggaamiyaasha adduunku ay u dhici karaan si elektaroonig ah iyada oo loo marayo wadahadal fiidiyow.
Ganacsadaha muxaafidka ah ahna duqii hore ee San Salvador, Najib Abu Kaila, ayaa waxaa lagu dhaariyay qarankan yar ee Bartamaha Ameerikaanka 6.6 milyan oo dad ay ku nool yiihin, isagoo wacad ku maray inuu dalka ka saari doono saboolnimada ba’an isla markaana uu soo afjari doono rabshadaha maandooriyaha.
Previous articleXubnaha Koongarasku Mareykunu waxay heleen warbixin sir ah oo ku saabsan Iran
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee Washington+ Sawirro
Masar waxay ugu baaqday Qaramada Midoobay inay soo faragaliso ka dib...
Daawo:Wadad sheegey inuu helay Dawada Corana vuris oo shaaciyey